Potato kagesi: izinzuzo, izici kanye nokusebenzisa Ukukhetha
Potato kagesi - kuyinto sasivumela elula nephumelelayo ehlelweni nto elehlukile, ivumela ekhaya Ngemizuzwana sokulungiselela ukupheka noma yokuwugazinga semali izimpande.
Izinzuzo olunikezwa imishini
Ukuqinisekisa ukuthi ungangabazi ukuthi inqubo enjalo kudingeka, kufanele siqale ngokucabangela zako. kufanele behlukene zazo yilezi:
- Easy (ungenayo ukugcina umkhondo kanjani ukuhlanza amazambane: ugeza izimpande ngokwanele abaphonse emgqonyeni).
- Ukuphumelela nesivinini (emelelwa imishini uyakwazi ngesikhathi esifushane sokulungiselela ukupheka ngamakhilogremu ezimbalwa nemifino).
- Okwezomnotho (amazambane peeler Electric akusho kudla imali enkulu kagesi, ngaphezu kwalokho, enquma ungqimba isikhumba ngokwanele mncane).
- Usayizi Small (kwansuku zisebenzisa ungakwazi ukuthenga umkhiqizo compact ukuthi ngeke isikhala esiningi ekhishini lakho).
- Gcina isikhathi (ungenayo ngesandla ukuhlanza kilogram of amazambane, ngesikhathi sabo esikhululekile kusukela le nqubo, ungakwazi ukwenza ezinye izinto).
Kufanele kuqashelwe ukuthi ukuthandwa kumadivayisi ezinjalo azibona kuphela empilweni yansuku zonke. Bebelokhu obusetshenziswa embonini ukudla. Potato kagesi inedizayini kahle elula. Siqukethe ithangi encane ngemimese ekhethekile noma disc, lapho izimpande futhi salala. Ukuze uqale umshini, umane ucindezele izinkinobho ezimbalwa ukukusiza ukhethe yokuhlanza imodi kanye nesikhathi.
Indlela ukukhetha umshini kwesokudla?
Ukuze idivayisi esebenza isikhathi eside, ngokucophelela futhi enesibopho yokusondela choice yakhe. Ukuze uqale nge inani imifino ukuthi udinga ukuba zihlanzwe nsuku zonke. Uma une emkhayeni omkhulu, noma kaningi izivakashi, kubalulekile ukuba makudle imodeli ntathu.
Yiqiniso, kagesi amazambane peeler kufanele abe nekhono elithile, ebheka ukusebenza imoto nesivinini yayo, kanye nenani enenergii yokuqothulwa.
Nakani design zedivayisi. Abanye onobuhle anemisila izikrini ekhethekile ogibele ngaphandle zedivayisi. Zadla ikhasi amazambane. Okuningi abaphumelelayo imikhiqizo ukuthi unekhono ukukhulula ukushiselwa ngqo kudoti.
Electric amazambane peeler ngoba indlu kungase kudingeke izindlela eziningana wokusebenza. Inombolo yabo incike izindleko zedivayisi. Ekuphileni awudingi umfuziselo ezinkulu. Kungcono ukukhetha compact ideskithophu iyunithi.
Izici ukusetshenziswa zedivayisi
Phakathi ukukhethwa ukunakwa umshini pay yokuthi lo kagesi amazambane peeler, ukubuyekezwa zazo ikakhulukazi omuhle, azange abe komnikelo futhi kwadingeka iziqinisekiso nokuvikeleka zisebenzisa. Buza umdayisi ukukubonisa isihloko imibhalo elihambisana nalesi sihloko ukuthi ifakazela izinga lomkhiqizo. Thenga imishini ezitolo ezikhethekile yaseNdlunkulu zikagesi
Ukuze amazambane peeler awazange ayiphule kwesikhathi, zama ukunakekela kahle ke. Idivayisi entsha musa ukulayisha ngokweqile, wasiqashisa ukusebenzisa isikhashana. Ngaphambi niphonsa izimpande kule esitsheni, ubageze. Zama ukukhetha amazambane nge surface bushelelezi ngaphandle komnikelo.
Ngemuva kwesicelo besikhundla uzodinga ageze futhi asule kahle. Kodwa ukukwenza ngendwangu emanzi kunokuba ngaphansi kwamanzi agobhozayo, ngakho njengoba ilimaze injini.
Pigeon (webele): Uhlolojikelele, izici, izinhlobo nezilinganiso
Setha "uMidori" - ikhambi yasekuqaleni etafuleni iholide
Amakhethini gazebos: izinhlobo, ngebuhle nebubi
Igesi, ugesi, electronic Piezo umentshisi egesi isitofu. I-apharathasi begodu yokusebenza izici
Avent webele futha: ukusiveza ubisi ngokushesha bese kahle
Anthurium Ukunakekelwa ekhaya
I-catalytic gas heaters njengenye yezinto ezihlukahlukene zokushisa
Indlela yokwenza intshumayelo PowerPoint: izigaba eziyinhloko
Ppm - lena kangakanani? Kuyini izinga avumelekile utshwala egazini e izingxenye ngamunye million?
Indlela yokwenza Burgers kusukela nengulube
Dolls Pony: ezihlekisayo ithoyizi ihhashi
Kangakanani rhinitis oyingozi
Lung scintigraphy: Izinkomba wahlola
Ufuna ukusuka efanelekayo wamafutha dermatitis
Doctor physiotherapist - ngubani? Yikuphi ephatha yezifo physiotherapist?
Ibhishi Dress: thunga futhi obumbene ngosuku olwandulela ngamaholide